Indawo yokufikela iMekong iqabane elitsha lokusungulwa kweGlasgow Declaration on Climate Action kuKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » News Sustainability » Indawo yokufikela iMekong iqabane elitsha lokusungulwa kweGlasgow Declaration on Climate Action kuKhenketho
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Indawo yokufikela iMekong iqabane elitsha lokusungulwa kweGlasgow Declaration on Climate Action kuKhenketho.
Indawo yokufikela iMekong yaba ngumsayini ozingcayo weGlasgow Declaration on Climate Action kuKhenketho kwiCOP26.
Isibhengezo seGlasgow ngeNyathelo yeMozulu kwezoKhenketho sidibanisa uphando lwamva nje kunye nobuchule behlabathi ukukhuthaza isenzo semozulu.
Isidingo sendlela engaguquguqukiyo yehlabathi yesenzo semozulu kukhenketho yenziwe yacaca, ngakumbi ngophando kwi-CO2 ekhutshwa yi-UNWTO/ITF kwaye yakhululwa kwi-UNFCCC COP25 ngoDisemba ka-2019.
Kunanini na ngaphambili, ishishini lokhenketho lehlabathi linethuba elilodwa lokubonisa amandla alo okuguqula ngokukhuthazayo nangokuqhuba isenzo semozulu.
Njengenxalenye yeenzame zayo zokudlala indima yobunkokeli kuluntu lokhenketho lwehlabathi, Indawo yokuya eMekong waba ngumtyikityi kwaye wasungula iqabane leGlasgow Declaration on climate Action in Tourism, eyasungulwa nge-4 kaNovemba 2021 ngexesha INkomfa ye-UN yoTshintsho lweMozulu (COP26).
Yasekwa kwi-2017, i-Destination Mekong (DM) yintlangano yezokhenketho yengingqi ezinikele ekuphumeleleni ummandla waseMekong, oquka iCambodia, i-PR China (amaPhondo aseGuangxi naseYunnan), iLao PDR, iMyanmar, iThailand, kunye neViet Nam, njengento ezinzileyo kunye nequkayo. indawo yokhenketho.
Isibhengezo seGlasgow ngesenzo seMozulu kwezoKhenketho sidibanisa ukuhamba kunye nokhenketho emva kweseti efanayo yeendlela zentshukumo yemozulu, ukulungelelanisa icandelo kunye nezibophelelo zehlabathi kunye nokuvuselela izisombululo zentsebenziswano kwimingeni emininzi ejongene namashishini kunye neendawo zokusingwa kwihlabathi jikelele.
Isibhengezo seGlasgow sikhuthaza ukukhawuleza kwesenzo semozulu kukhenketho ngokuqinisekisa izibophelelo zokunciphisa ukukhutshwa kwezokhenketho ubuncinane ngama-50% kwiminyaka elishumi ezayo kwaye kufezekiswe i-Net Zero ngokukhawuleza ngaphambi kwe-2050.
Njengomtyikityi weGlasgow Declaration kwi-Climate Action kuKhenketho, kwiNdawo yokuFikela eMekong izimisele ukulungelelanisa izenzo zayo kunye neengcebiso zamva nje zenzululwazi zokuqinisekisa ukuba indlela yayo ihlala ihambelana nokunyuka okungekho ngaphezu kwe-1.5 ° C ngaphezu kwamanqanaba angaphambi koshishino ngo-2100. Kwakhona uye wavuma ukuhambisa okanye ukuhlaziya izicwangciso zesenzo semozulu kwiinyanga ezili-12, lungelelanisa iinkqubo kunye neendlela ezintlanu zeSibhengezo (Linganisa, i-Decarbonize, Hlaziya, Ukusebenzisana, iMali), ingxelo esidlangalaleni ngonyaka, kwaye usebenze ngomoya wentsebenziswano, ukwabelana ngeendlela ezilungileyo kunye nezisombululo, kunye nokusasaza ulwazi.
“Ngaphezulu kunanini na ngaphambili, ishishini lezokhenketho lehlabathi linethuba elilodwa lokubonisa amandla alo okuguqula ngokukhuthazayo nangokuqhuba intshukumo yemozulu. Ayiyongxakeko nje kuphela kodwa ngumba wesidima somntu,” utshilo uCatherine Germier-Hamel, iCEO, iDestination Mekong.
Isibhengezo seGlasgow ngeNyathelo yeMozulu kwezoKhenketho sidibanisa uphando lwamva nje kunye nobuchule behlabathi ukukhuthaza isenzo semozulu. Iza kubanjwa kwiwebhusayithi yeNkqubo yoKhenketho oluZinzileyo yePlanethi enye, ixhaswa ngamaNyathelo aCetyisiweyo ukulungiselela abachaphazelekayo bokhenketho kwihlabathi liphela ukuba bathathelwe ingqalelo njengenxalenye yesicwangciso sabo sokusebenza, kunye nezinye izixhobo. Njengoko isibhengezo sichaza: "Utshintsho olufanelekileyo kwi-Net Zero ngaphambi kwe-2050 luya kwenzeka kuphela ukuba ukubuyiswa kokhenketho kukhawuleza ukwamkelwa kokusetyenziswa okuzinzileyo kunye nemveliso, kwaye kuchaza kwakhona impumelelo yethu yexesha elizayo ukuba siqwalasele ixabiso lezoqoqosho kuphela kodwa kunokuhlaziywa ngokutsha kwe-ecosystem, biodiversity, kunye noluntu.”
Imfuno yendlela ehambelanayo yehlabathi yesenzo semozulu kukhenketho yenziwe yacaca, ngokukodwa ngophando kwi-CO2 ekhutshwayo eyenziwa yi-UNWTO/ITF kwaye yakhululwa kwi-UNFCCC COP25 ngoDisemba ka-2019. ukunyuka ngama-25% ngo-2030 ukusuka kumanqanaba ka-2016, ngokuchasene nemeko yangoku yamabhongo.